Inkampani iphrofayela - Ningbo Rykay Electric Co., Ltd.
N ingbo Rykay Electric Co., Ltd. speacialized ekukhiqizeni mini efrijini & imoto epholile & ibhokisi ukufudumala, ice umenzi, ubhiya ezibandayo, njll Sine isipiliyoni neminyaka engaphezu kwengu-16 kulo mkhakha.
W e baye bakha ubuhlobo nokubambisana eqinile futhi isikhathi eside unobuningi omkhulu izinkampani ngaphakathi leli bhizinisi kwezilwandle. Emva-ukudayiswa service ngokushesha futhi onguchwepheshe kuhlinzekwa ngu-consultant iqembu lethu has ujabule abathengi bethu. Eningiliziwe Info kanye nemingcele kusukela okuthengiswayo cishe iyobe ithunyelwe kuwe nganoma yisiphi obuphelele bavume. Amasampula Mahhala bakhululwe futhi inkampani uhlole ukuze corporation yethu.
O inkampani ur ufikile ezothatha Umumo ukuthuthukiswa ozinzile futhi ukuphayona spirits.Our RYKAY brand Ukupholisa kagesi bafudumale iyunithi nemoto fridges zenziwa nge izinto kakhulu, izinto zobuchwepheshe obuphambili, design ekhangayo, nisekeliwe izinga okuthembekile, lt ubamukela AC / DC ngoba amandla ukuthengisela okulula ukuyiphatha. Imikhiqizo athandwa ithengiswe Japan. South Korea, USA, UK, Australia, njll izinto zethu kahle eyatholwa amakhasimende.
Inkampani yethu ukwamukela amakhasimende amasha namadala ibhizinisi nokubambisana.